Sri Lanka overwhelm Zimbabwe to win TNT
Thread: Sri Lanka overwhelm Zimbabwe to win TNT
HARARE: A dominant Sri Lanka came to within a freak run-out of whitewashing Zimbabwe in the final of the Tri-nations tournament at Harare Sports Club here on Wednesday.
The Sri Lankans scored a leisurely 203-1 in 34.4 overs to win with ease in reply to Zimbabwe''s effort of 199 all out in 49 overs.
Although Zimbabwe''s Brendan Taylor was named man of the series afterwards it was Tillikeratne Dilshan who stole the day.
It was Dilshan''s seventh one-day international century and his first against Zimbabwe.	"I was really elated, both for the 100 and for our series victory to take home after a hard time abroad," he said.
The run-out came with the score on 160 -- Sri Lanka''s highest opening partnership against Zimbabwe in internationals.
Tatenda Taibu was initially a culprit with only four runs from his first 22 balls faced, but he redeemed himself by becoming easily Zimbabwe''s top scorer with 71.
Home team captain Elton Chigumbura said: "We were put under pressure right from the start and just couldn''t get going early on. But we take a lot of pluses from the last two weeks."